Ugu yaraan 20 qof oo ku dhimatay fatahaado ku dhuftay galbeedka Venezuela | Star FM
Home Caalamka Ugu yaraan 20 qof oo ku dhimatay fatahaado ku dhuftay galbeedka Venezuela
Ugu yaraan 20 qof oo ku dhimatay fatahaado ku dhuftay galbeedka Venezuela
Wararka ka imaanaya gobolka Merida ee galbeedka dalka Venezuela ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen halkaas kadib roobab xooggan oo sababay daadadka iyo wabiyada oo buux dhaafiyay kadibna biyaha soo daayay.
Sarkaal ka tirsan xisbiga talada haya gobolka Merida ayaa telefeshinka dowladda kaga dhawaaqay inay tirada dhimashadu korortay wuxuuna xusay in mas’uuliyiinta gobolku ku howlan yihiin sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyada isgaarsiinta oo meelaha qaar oo go’ay.
Barasaabka gobolkaasi Ramon Guevara ayaa goor sii horaysay wuxuu sheegay in in ka badan 1,200 oo guryo ah ay burbureen sidoo kalena wali la la’yahay 17 qof oo dheeraad halka shaqaalaha gurmadkuna ay dadka maqan ka baarayaan burburka hoostiisa.
Waxaa uu mas’uulkan ku baaqay inaan arrintaan la siyaasadayn loona wada istaago sidii dhibaatada taagan xal loogu heli lahaa.
Sawirrada lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya baabuurtii waddooyinka yaallay oo ay biyuhu qaadeen, dhismayaal iyo meherado gabi ahaanba biyuhu buuxdhaafiyeen iyo waddooyinka oo dhiiqo iyo burbur xooggan lagu arkayo.
Dhowr magaalo oo ku yaalla gobolka ay mashaqadu ka dhacday oo ay ka mid yihiin Tovar, Bailadores, Zea iyo Santa Cruz de Mora ayaa koronto la’aan ah maadaama daadadku ay waxyeeleeyeen nidaamka iftiiminta sida uu sheegay guddoomiyaha gobolku.
Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in wasiirka bartoolku hoggaaminayo dadaallada samatabixinta ah ee socda.
Dhanka kale Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha Venezuela Remigio Ceballos ayaa isna warbaahinta dowladda u sheegay in ugu yaraan 54,543 qof oo ku nool 87 degmo ay saamayntu gaartay sidoo kalena gobollada weli ku jira xaaladaha degdegga ah ay yihiin Merida, Tachira, Zulia, Apure, Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro, Monagas iyo Aragua.
Ilaa hadda 80 ka mid ah kooxaha dab –damiska iyo 60 sarkaal oo ka tirsan waaxyaha ilaalinta Rayidka ee gobolka Merida ayay dowladdu sheegtay in loo diray hawlgallo deg -deg ah ayagoo kaashanaya ciidamada qalabka sida ee ku sugan Gobolka.
Barasaabka gobolka Merida Ramon Guevara ayaa mas’uuliyiinta ku amray inay diyaariyaan goobo gaar ah oo lagu aruuriyo gargaarka bina aadanimada si ay dadku u helaan kaalmooyin ay ka mid yihiin biyo iyo cunto joogta sidoo kale agabka dhaxanta laga dugsado waxayna dowladdu howlwadeeno caafimaad gaysay meelaha ugu daran ee ay ka jiraan xaaladaha adag.
Previous articleDHAGEYSO:Faadumo Geedi oo sheegtay in ansaxinta miisaaniyadda Wajeer aan lagu saleyn baahiyaha jiro
Roobab culus iyo daadad ka dhashay oo ku dhuftay Suudaan
Wararka naga soo gaaraya dalka Suudaan ayaa sheegaya in 13 gobol ay saameeyeen fatahaado ka dhashay roobab culus oo da’ay. Waxay dhibaato soo gaartay 288,000...
Madaxda Maraykanka iyo Faransiiska oo kulmaya bisha Oktoobar
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inay kulan yeeshaan bisha Tobnaad ee sanadkan. Labadan dowladood ayaa ku dadaalaya sare...
DHAGEYSO:Hal qof oo lagu dilay Laikipia
starfm - September 23, 2021
Wararka naga soo gaaraya degmada Olmoran ee ismaamulka Laikipia ayaa sheegaya in xalay hal qof la dilay. Sidoo kale waxaa la dhacay ugu yaraan 30...
Madaxweynaha dalka oo ka qeybgalaya munaasabad lagu maamuusayo ciidanka badda
Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta guddoonsiin doona ciidamada badda ee ku sugan saldhigga Manda garaaddada madaxweynenimo iyo midda midnimo. Hoggaamiyaha dalka ayaa waxaa la...
Mudavadi: Khilaafka Uhuru iyo Ruto wuxuu kala qaybin karaa ciidamada ammaanka
Wararka Kenya starfm - September 23, 2021 0
Hoggaamiyaha xisbiga ANc Musalia mudavadi ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto uu sababi karo kala...
Madaxweynaha dalka oo soo jeediyay in caalamka uu si siman u qaybsado tallaalka COVID19
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in beesha caalamka ay si siman u qaybsato dawooyinka tallaalka ka dhanka...
Guddiga TSC oo xeer cusub soo saaray
Guddiga adeegga macallimiinta ee TSC ayaa soo saaray xeer cusub oo dhigaya in barayaasha dugsiyada dowladda laga doonayo inay shan sano ka dib cusbooneysiiyaan...
Barasaabka Kirinyaga oo shacabka ugu baaqday in aan lagu kala qaybin doodda BBI
Guddoomiyaha ismaamulka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka Anne Waiguru ayaa kenyaanka ku boorrisay inaynan oggolaan kala qaybsanaan salka ku haysa doodaha sharci beddelka ee...
Kenya iyo Qatar oo xoojinaya iskaashiga amni
Dowladaha Kenya iyo Qatar ayaa ku dadaalaya sidii ay sare ugu qaadi lahayeen xiriirka ka dhexeya ee dhanka amniga ah. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee...
Machadka KICD oo tixgelinaya cabashada waalidiinta ee CBC
Machadka horumarinta manaahijta dalka ee (KICD) ayaa waalidiinta u xaqiijiyay inuu tixgelin doono tabashooyinka ay qabaan ee la xiriira nidaamka cusub ee tacliinta kaaso...
Maxkamadda oo maanta go’aaminayso racfaan ay codsadeen boolis dil lagu eedeyay
Waxaa la filayaa inay maanta maxkamadda go’aan ka soo saarto codsi racfaan ah oo ay gudbiyeen 6 ka mid ah ciidamada ammaanka ee wadanka...
shirka golaha wadatashiga Soomaaliya oo muqdisha ka dhacay
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyay kulanka ay habka fogaan aragga Xalay ku yeesheen madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka Soomaaliyeed. Shirkaan ayaa diiradda lagu...
DHAGEYSO:Masuuliyiin ka socday QM oo la kulmay madaxda wasaarada cadaalada Soomaaliya
Wasiirka wasaarada Caddaalada Xukuumada Fedraalka Soomaaliya C/qaadir Maxamed Nuur ayaa xafiiskiisa kulan looga hadlayey Hormarinta hay'ada garsoorka Soomaaliya kula qaatay wafdi ka socdey QM. Qodobada...
DHAGEYSO:Faysal Cali Waraabe oo eedaymo u jeediyay Xukuumada Soomaaliland
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliya ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa Xukumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi wuxuu ku...
Caalamka starfm - September 23, 2021 0